CHPli Tanrıkuluမှမေးခွန်း ၁၁၁ ဝေဖန်သောရုပ်သံလိုင်း RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်၁၁၈ CHPli Tanrıkuluမှဝေဖန်သောရုပ်သံလိုင်း
24 / 01 / 2020 34 အစ္စတန်ဘူလ်, အထွေထွေ, ရုပ်သံလိုင်းအစ္စတန်ဘူလ်, လမ်းမကြီး, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ
Kanal Istanbul ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးစာချုပ်အပေါ် IMM ရဲ့ရှင်းလင်းချက်
ရီပတ်ဘလီကန်ပြည်သူ့ပါတီ Istanbul လက်ထောက်ရှေ့နေ။ Sezgin Tanrikulu, Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်တူရကီ၏ရန်းအမျိုးသားညီလာခံနှင့်ပတ်သက် 118 Pojesi အရေးပါသောမေးခွန်းများပါဝင်သည်ဟုအဆိုပြုချက်ကိုတင်ပြခဲ့သည်။
ထောင်ပေါင်းများစွာသောနိုင်ငံသားများသည် Kanal Istanbul စီမံကိန်းမှသဘာဝတရားအားနောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ပျက်စီးမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေမည့်ဥပဒေမူဘောင်အတွင်းကန့်ကွက်ခဲ့ကြသည်။
ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ရက်တွင်စတင်ခဲ့သော Kanal Istanbul နှင့်ပတ်သတ်သော EIA အစီရင်ခံစာအတွက်ကန့်ကွက်မှုပြီးဆုံးခဲ့ပြီးရာသီဥတုဆိုးရွားနေသော်လည်းအစ္စတန်ဘူလ်နိုင်ငံသားများသည် Balmumcu ရှိပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာနသို့ ၁၀ ရက်ကြာစုရုံးရောက်ရှိခဲ့ပြီးအသနားခံမှုပေါင်း ၁၀၀၀၀၀ ကျော်ကိုညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာနသို့ပေးပို့ခဲ့သည်။
CHP မှ Sezgin Tanrıkuluကသူ၏အဆိုပြုချက်တွင်ပြောကြားခဲ့သည့်ဘတ်ဂျက်သည်ယနေ့ငွေလဲနှုန်းဖြင့်တွက်ချက်သောအခါဒေါ်လာ ၁၂ ဘီလီယံ ၆၂၆ သန်းနှင့်ညီမျှသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံ ၀ န်ကြီးဌာန၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ထားသည့်တရားဝင်တင်ဆက်မှုတွင် Kanal Istanbul ၏စုစုပေါင်းကုန်ကျငွေသည်ဒေါ်လာဘီလီယံ ၂၀ ကုန်ကျမည်ဟုဖော်ပြထားသည်။ အဆိုပြုလွှာတွင်ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း၊ ရေလှောင်ကန်များ၊ အရေးပေါ်နေရာများ၊ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးပစ္စည်းများစသည်တို့အတွက်အချက်အလက်များပါဝင်သည်။ ဒေါ်လာ ၅ ဘီလီယံ၊ စုစုပေါင်းလမ်းကြောင်းတည်ဆောက်ရေးကုန်ကျစရိတ် - ၁၅ ဘီလီယံဒေါ်လာ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံနေရာရွှေ့ပြောင်းခြင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ် - ဒေါ်လာ ၅ ဘီလီယံ။
CHP Istanbul လက်ထောက် Sezgin Tanrıkulu၏မေးခွန်းများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
၁။ Kanal Istanbul Project ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးနှုန်းနှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသားမည်မျှနေထိုင်နိုင်သနည်း။
၂။ Kanal Istanbul စီမံကိန်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်ဖြင့် KOSGEB စီမံကိန်းမည်မျှကိုထောက်ပံ့နိုင်သနည်း။
၃။ Kanal Istanbul Project ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးနှုန်းဖြင့်ကျောင်းသားများသည်သူတို့၏ပညာရေးချေးငွေကိုမည်မျှရရှိနိုင်သနည်း။
၄။ Kanal Istanbul Project ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးနှုန်းဖြင့်ပညာသင်ဆုကိုကျောင်းသားမည်မျှရရှိနိုင်သနည်း။
၅။ လူငယ်လူ ဦး ရေတွင်အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းမှာ ၂၆.၁ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီး ၄.၅ မှတ်တိုးလာသည်။ ၁၅-၆၄ အသက်အရွယ်အုပ်စုတွင် ၁၄.၁ ရာခိုင်နှုန်းအဖြစ် ၂.၄ မှတ်တိုးလာသည်။ နိုင်ငံသားမည်မျှရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်ကြောင်းအလုပ်လက်မဲ့ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းနိုင်ပါသလား။
၆။ Kanal Istanbul စီမံကိန်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူသောက်သုံးရေကွန်ယက်ကိုကျေးရွာပေါင်းမည်မျှတည်ဆောက်နိုင်သနည်း။
၈။ Kanal Istanbul စီမံကိန်းနှင့်နှင်းမိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းခြင်းကြောင့်လမ်းများပိတ်ထားသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏တည်းခိုခန်းများ၊ ကျေးရွာများ၊ ခရိုင်များနှင့်ပြည်နယ်များတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်ဆီးနှင်းများနှင့်လမ်းပိတ်ဆို့ဆေးများမည်မျှဝယ်ယူနိုင်သနည်း။
၉။ အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူများကိုဆီးနှင်းများဖုံးလွှမ်းနေသောလမ်းများပေါ်ရှိလူနာများအတွက် Kanal Istanbul စီမံကိန်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်9×4pallet လူနာတင်ယာဉ်မည်မျှခေါ်ဆောင်သွားနိုင်သနည်း။
၁၀။ Kanal Istanbul Project ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးနှုန်းဖြင့်ကျောင်းမည်မျှတည်ဆောက်နိုင်သနည်း။
၁၁။ Kanal Istanbul Project ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်ခန့်အပ်ခံရရန်စောင့်ဆိုင်းနေသည့်ဆရာမည်မျှစတင်အလုပ်လုပ်နိုင်မည်နည်း။
၁၂။ Kanal Istanbul ပရောဂျက်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်ခန့်ထားရန်စောင့်ဆိုင်းနေသောမသန်စွမ်းဆရာများမည်မျှစတင်အလုပ်လုပ်နိုင်မည်နည်း။
၁၃။ Kanal Istanbul Project ၏ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုစျေးနှုန်းနှင့်လက်ထပ်မည့်သူများမည်မျှပင်လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုအကူအညီကိုရနိုင်သနည်း။
၁၄။ Kanal Istanbul Project ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးနှုန်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံသားများ GSS မည်မျှပေးဆောင်နိုင်သနည်း။
၁၅။ SMA သည် Kanal Istanbul Project ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးနှုန်းနှင့် SMA ကိုအခမဲ့မည်မျှရနိုင်မည်နည်း။
၁၆။ Kanal Istanbul စီမံကိန်း၏ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်ဆည်မည်မျှတည်ဆောက်နိုင်သနည်း။
၁၇။ Kanal Istanbul စီမံကိန်းနှင့်အတွင်းပိုင်းပစ္စည်းကိရိယာများအပါအ ၀ င်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးမည်မျှတည်ဆောက်နိုင်သနည်း။
၁၈။ ကျန်းမာရေးနယ်ပယ်တွင်ရက်ချိန်းယူရန်စောင့်ဆိုင်းနေသည့် Canal Istanbul Project ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုးဖြင့်နိုင်ငံသားမည်မျှစတင်ရန်သေချာစေနိုင်သနည်း။
၁၉။ Kanal Istanbul စီမံကိန်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးနှုန်းဖြင့် ၅၀% ထောက်ပံ့ကြေးဖြင့်လယ်သမားမည်မျှလယ်ထွန်စက်ပံ့ပိုးမှုပေးနိုင်သနည်း။
၂၀။ Kanal Istanbul စီမံကိန်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးနှုန်းဖြင့်မည်မျှလယ်သမား (၁၀ ယောက်စီ) နို့နွားများကိုပေးမည်နည်း။
၂၁။ Kanal Istanbul စီမံကိန်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးနှုန်းဖြင့်မွေးမြူရေးအတွက်မည်မျှလယ်သမားများ (၁၀ ယောက်စီ) ရရှိနိုင်မည်နည်း။
၂၂။ Kanal Istanbul Project ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးနှုန်းဖြင့်နိုင်ငံခြားဘာသာစကားသင်ကြားရန် ၆ လတာနိုင်ငံခြားဘာသာစကားသင်တန်းကိုမည်မျှလူငယ်များရနိုင်မည်နည်း။
၂၃။ Kanal Istanbul Project ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးနှုန်းဖြင့် R&D နှင့်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးမှုစင်တာများမည်မျှတည်ထောင်နိုင်သနည်း။
၂၄။ Kanal Istanbul စီမံကိန်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးနှုန်းဖြင့်ရွက်လှေဆိပ်ကမ်းမည်မျှတည်ဆောက်နိုင်သနည်း။
၂၅။ Kanal Istanbul Project ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးနှုန်းဖြင့်အမျိုးသမီးမည်မျှအလုပ်ခန့်နိုင်သည်။
၂၆။ Kanal Istanbul Project ၏ဈေးနှုန်းဖြင့်မီးသတ်ဆေးမည်မျှ ၀ ယ်နိုင်သည်။
၂၇။ Kanal Istanbul စီမံကိန်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်အများပြည်သူအတွက်ခန့်ထားနိုင်သည့်မသန်စွမ်းသောနိုင်ငံသားမည်မျှရှိသနည်း။
၂၉။ Kanal Istanbul Project ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဈေးနှုန်းဖြင့်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်အနုပညာလှုပ်ရှားမှုများတွင်အသုံးပြုရန်တစ်နှစ်လျှင် TL ၁၀၀၀ တန်သောကဒ်ပြားတစ်ခုကိုကျောင်းသားမည်မျှဖြန့်ဝေနိုင်မည်နည်း။
၃၀။ Kanal Istanbul Project ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဓာတ်အားပေးစက်ရုံမည်မျှတည်ဆောက်နိုင်သနည်း။
၃၁။ Kanal Istanbul စီမံကိန်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူလေတာဘိုင်မည်မျှတပ်ဆင်နိုင်သနည်း။
၃၂။ Kanal Istanbul Project ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးနှုန်းနှင့်အတူနောက်ထပ်ညွှန်ကိန်းအစီအစဉ် ၃၆၀၀ မှလူမည်မျှအကျိုးရရှိနိုင်သနည်း။
၃၃။ Canal Istanbul Project ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးနှုန်းဖြင့်မည်သည့်ပြည်တွင်းကားကိုလုပ်နိုင်သနည်း။
၃၄။ Canal Istanbul စီမံကိန်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူပြည်တွင်းလေယာဉ်မည်မျှပြုလုပ်နိုင်သနည်း။
၃၅။ Kanal Istanbul Project ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူကျောင်းသားများသည်လူမှုရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအရတိုးတက်စေရန်ပြည်တွင်းခရီးစဉ် (တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်) တွင်ပါ ၀ င်ရန်ခွင့်ပြုချက်မည်မျှရှိသနည်း။
၃၆။ Kanal Istanbul Project ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးနှုန်းနှင့်အတူမည်သည့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများသည်လူမှုရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအရတိုးတက်အောင်လုပ်ရန်ပြည်ပသို့ (တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်) တက်ရောက်ရန်ခွင့်ပြုချက်ရနိုင်သနည်း။
၃၇။ ငှားရမ်းခ၏တစ်ဝက်၊ အိမ်၊ အဆောင်နှင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအပြင် Kanal Istanbul Project ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးနှုန်းအတွက်ပြည်နယ်ကိုလွှမ်းခြုံနိုင်ပါသလား။
၃၈။ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးမှုဥပဒေကြမ်း၏ထက်ဝက်သည်နိုင်ငံတော်မှမည်မျှတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများနှင့် Kanal Istanbul စီမံကိန်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်ကိုဖုံးလွှမ်းနိုင်မည်နည်း။
39. Kanal Istanbul Project ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်အလုပ်လုပ်နေသည့်မိခင်မည်မျှရှိပါသလဲ။
40. ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခြေအနေနှင့် Kanal Istanbul စီမံကိန်းအတွက်ငါးနှစ်လစာပေးခြင်းအားဖြင့်လူမည်မျှအလုပ်ခန့်နိုင်သနည်း။
41. Kanal Istanbul Project ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်အလုပ်လုပ်နေသည့်မိခင်မည်မျှရှိပါသလဲ။
၄၂။ Kanal Istanbul Project ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးနှုန်းဖြင့်အထူးပညာရေးစင်တာများမည်မျှတည်ထောင်နိုင်သနည်း။
43. Kanal Istanbul Project ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးနှုန်းဖြင့်ပြည်သူ့ပညာရေးစင်တာများကိုမည်မျှဖွင့်လှစ်နိုင်မည်နည်း။
44. Kanal Istanbul Project ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးနှုန်းဖြင့်ညစ်ပတ်သောရေသန့်စင်စက်ရုံမည်မျှတည်ဆောက်နိုင်သနည်း။
၄၅။ Kanal Istanbul Project ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးနှုန်းဖြင့်တိရစ္ဆာန်အမိုးအကာမည်မျှတည်ဆောက်နိုင်သနည်း။
46. ​​Kanal Istanbul Project ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်မည်မျှတိရိစ္ဆာန်အမိုးအကာများဆောက်လုပ်နိုင်မည်နည်း။
လူ ၂၀၀ ခန့်ပါ ၀ င်နိုင်သော ၄၇ ကြိမ်မြောက် Kanal Istanbul စီမံကိန်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးနှုန်းဖြင့်အဆောင်မည်မျှတည်ဆောက်နိုင်မည်နည်း။
၄၈။ Kanal Istanbul Project ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်မည်မျှကြည့်ရှုလေ့လာနိုင်ပါသလဲ။
49. Kanal Istanbul စီမံကိန်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးနှုန်းအတွက်မိုင်းမည်မျှတည်ဆောက်နိုင်သနည်း။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးနှုန်း ၅၀ ဖြင့်ကီလိုမီတာမည်မျှလုပ်နိုင်သနည်း။ Kanal Istanbul Project?
၅၁။ Kanal Istanbul စီမံကိန်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးနှုန်းဖြင့်ထိန်းသိမ်းထားပြီးပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံရန်အတွက်နှစ်ဆကီလိုမီတာမည်သည့်လမ်းများကိုထိန်းသိမ်း။ ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်သနည်း။
52. Kanal Istanbul စီမံကိန်း၏ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်အစည်းအဝေးကျင်းပမည့်နေရာမည်မျှတည်ဆောက်နိုင်သနည်း။
53. Kanal Istanbul ပရောဂျက်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်မည်သည့်ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းများကိုထောက်ပံ့နိုင်သနည်း၊ ပိုးသတ်ဆေး၏နိုင်ငံသားနှင့်နိုင်ငံသားကိုရနိုင်သည်။
54. Kanal Istanbul စီမံကိန်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးနှုန်းဖြင့် TUBITAK စီမံကိန်းမည်မျှကိုချီးမြှင့်ရမည်နည်း။
55. Kanal Istanbul စီမံကိန်း၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပြည့်စုံသောကျန်းမာရေးစင်တာများမည်မျှဖွင့်နိုင်မည်နည်း။
၅၆။ Kanal Istanbul Project ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းသင်တန်းများကိုကျေးရွာပေါင်းမည်မျှတွင်ပေးနိုင်သနည်း။
57. အသက်အရွယ်လိုအပ်ချက်နှင့်အညီအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအထက်တန်းကျောင်းမည်မျှကို Kanal Istanbul Project ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပြန်လည်သက်တမ်းတိုးနိုင်ပါသလဲ။
59. Kanal Istanbul စီမံကိန်းနှင့်ရုပ်ရှင်ရုံ၊ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်စသည်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးနှုန်း။ ထိုကဲ့သို့သောမီဒီယာ element များ၏အကူအညီဖြင့်မြှင့်တင်ရန်နိုင်သလား?
၆၀ ကြိမ်မြောက် Canal Istanbul စီမံကိန်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးနှုန်းဖြင့်မသန်စွမ်းသောနိုင်ငံသားများအားဘက်ထရီစွမ်းအင်သုံးမော်တော်ယာဉ်နှင့်အိမ်ဝင်ပေါက်သို့ချဉ်းကပ်နိုင်သောလမ်းများပါရှိနိုင်ပါသလား။
၆၁။ Kanal Istanbul စီမံကိန်း၏ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုစျေးနှုန်းနှင့်အကြားအာရုံကိုကြားနိုင်သည့်မသန်စွမ်းသူများကိုမည်မျှထောက်ပံ့ပေးနိုင်သနည်း။
62. အတားအဆီးကင်းသောကားရပ်နားရန်နေရာကို Kanal Istanbul Project ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဈေးနှုန်းဖြင့်ဆောက်လုပ်နိုင်သည်။ အထူးပညာရေး၊ ကလေးသူငယ်များသည်၎င်းတို့၏ပညာရေး၊ အတွေ့အကြုံနှင့်စွမ်းရည်များမည်မျှဖွံ့ဖြိုးနိုင်သည်။
63. Canal Istanbul စီမံကိန်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများစသည်တို့မသန်စွမ်းသူမည်မျှရှိသည်။ ပြည်နယ်ကဖုံးလွှမ်းနိုင်သလဲ
Kanal Istanbul Project ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးနှုန်းဖြင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဆေးရုံမည်မျှကိုဖွင့်လှစ်နိုင်သနည်း။
65. Kanal Istanbul Project ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးနှုန်းဖြင့်လူထုစိတ်ကျန်းမာရေးစင်တာမည်မျှဖွင့်နိုင်သနည်း။
66. လူထုတွင်အလုပ်လုပ်သော ၀ န်ထမ်းအင်အားမည်မျှရှိသနည်း။
67. အရေးပါသောအရာ၊ ဆေးဝါး၊ ခွဲစိတ်ကုသမှုနှင့်ကုသမှုကုန်ကျစရိတ်များသည့်လူနာမည်မျှသည် Kanal Istanbul စီမံကိန်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းနိုင်သနည်း။
68. အသက် ၁၈ နှစ်အောက်ကလေးများဖြစ်သည့်တိုင် Kanal Istanbul စီမံကိန်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရသည့်ကလေးသူငယ်များမည်မျှငွေရေးကြေးရေးထောက်ပံ့မှုဖြင့်ပညာရေးဘ ၀ ကိုဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်မည်နည်း။
69. Kanal Istanbul စီမံကိန်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးနှုန်းဖြင့်မည်မျှမိသားစုများ (လစဉ်ဝင်ငွေ ၂၅၀၀ အောက်လိုင်းရှိသူ ၄ ဦး)၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ လျှပ်စစ်နှင့်ရေကိုငှားရမ်းနိုင်သနည်း။
70. Kanal Istanbul စီမံကိန်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူအမျိုးသမီးအမိုးအကာတွင်မည်မျှနေထိုင်နိုင်မည်နည်း။
၇၁။ Kanal Istanbul စီမံကိန်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာပြproblemsနာများကိုကာကွယ်ရန်ပတ် ၀ န်းကျင်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်မည်မျှတည်ထောင်နိုင်သနည်း။
72. Kanal Istanbul စီမံကိန်း၏အရင်းအနှီးနှင့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုအရင်းအမြစ်မှခွဲထုတ်ခြင်းစီမံကိန်းကိုမြို့ကြီးများမည်မျှတွင်အာမခံနိုင်မည်နည်း။
73. Kanal Istanbul စီမံကိန်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူပတ်ဝန်းကျင်အပေါ်မည်မျှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုပံ့ပိုးပေးနိုင်သနည်း။
74. Kanal Istanbul စီမံကိန်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူရေရှည်တည်တံ့မည့်စိုက်ပျိုးရေးအလေ့အထမည်မျှရှိနိုင်မည်နည်း။
75. နည်းပညာကိုအသုံးပြုရန်ကျောင်းများ၏အခြေအနေသည် Kanal Istanbul စီမံကိန်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပညာရေးတွင်တန်းတူအခွင့်အလမ်းနိယာမ (အထူးသဖြင့်ကျေးရွာများနှင့်ကျေးလက်ဒေသများ) အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်နိုင်ပါသလား။
76. Kanal Istanbul စီမံကိန်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးနှုန်းနှင့်အတူအိုးမဲ့အိမ်မဲ့နိုင်ငံသားမည်မျှကိုအဆက်မပြတ်နေရာယူထားနိုင်မည်နည်း။
77. အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်သူများအတွက်အလုပ်လုပ်သောအစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများကို Kanal Istanbul Project ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးနှုန်းဖြင့်မည်ကဲ့သို့ထောက်ပံ့နိုင်သနည်း။
78. ကျွန်ုပ်တို့၏အိုးမဲ့အိမ်မဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်သည့် Kanal Istanbul Project ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူလူ့အဖွဲ့အစည်းသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိရန်မည်မျှလေ့လာမှုကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သနည်း။
၇၉။ Kanal Istanbul စီမံကိန်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်သမိုင်းဝင်အဆောက်အ ဦး မည်မျှပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်သနည်း။
၈၀။ Kanal Istanbul စီမံကိန်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူငလျင်ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နိုင်သောအဆောက်အအုံများမည်မျှပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်မည်နည်း။
၈၁။ Kanal Istanbul Project ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်ဖြင့် AFAD စီမံကိန်းမည်မျှကိုရန်ပုံငွေထောက်ပံ့နိုင်သနည်း။
၈၂။ တိရစ္ဆာန်မည်မျှအတွက် Kanal Istanbul Project ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးနှုန်းအတွက်အခမဲ့ကုသမှုကိုပေးနိုင်ပါသလဲ။
83. လူမှုရေးအကူအညီလိုအပ်သောကျောင်းသားများ (ÖSYMမှ) နှင့် Kanal Istanbul Project ၏စာမေးပွဲကြေးကိုအစိုးရကမည်မျှပေးမည်နည်း။
84. Kanal Istanbul စီမံကိန်း၏တန်ဘိုး (၁၀၀၀၀၀ TL) ၏ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်မည်သည့်လူမှုရေးအိမ်ရာကိုဆောက်လုပ်နိုင်မည်နည်း။
85. Kanal Istanbul စီမံကိန်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူအာကာသသို့ဂြိုဟ်တုမည်မျှလွှတ်နိုင်မည်နည်း။
86. Kanal Istanbul Project ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးနှုန်းဖြင့်ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကိုစတင်လိုသောလုပ်ငန်းရှင်မည်မျှ TL ၅၀,၀၀၀ ကိုထောက်ပံ့မှုပေးနိုင်သနည်း။
၈၇။ Canal Istanbul Project မှနိုင်ငံတော်တွင်ဗလီ၊ cemevis၊ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများနှင့်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများ၏လျှပ်စစ်ကုန်ကျစရိတ်မည်မျှရှိသနည်း။
၈၈။ ဗလီ၊ cemvi၊ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့်ဘုရားကျောင်းများအတွက်ကုန်ကျစရိတ်သည် Canal Istanbul Project ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်မည်မျှကုန်ကျမည်နည်း။
၈၉။ Kanal Istanbul စီမံကိန်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးနှုန်းဖြင့်အမြန်ရထားလမ်းမည်မျှတည်ဆောက်နိုင်မည်နည်း။
90. Kanal Istanbul Project ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးနှုန်းဖြင့်အစိုင်အခဲစွန့်ပစ်ပစ္စည်းစွန့်ပစ်သည့်စက်မည်မျှတည်ဆောက်နိုင်သနည်း။
၉၁။ Kanal Istanbul Project ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးနှုန်းဖြင့်လူ ၁၀၀ စွမ်းဆောင်ရည်ရှိသောသူနာပြုအိမ်မည်မျှတည်ဆောက်နိုင်သနည်း။
92. Kanal Istanbul စီမံကိန်းနှင့်ရှေးဟောင်းသုတေသနတူးဖော်ရန်လျာထားသည့်ဘတ်ဂျက်၏ရင်းနှီးမြှပ်နှံစျေးနှုန်းကိုမြှင့်တင်ခြင်းဖြင့်မည်သည့်တူးဖော်ခြင်းနှင့်သုတေသနလုပ်ငန်းများကိုအရှိန်မြှင့်တင်နိုင်သနည်း။
93. Kanal Istanbul Project ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးနှုန်းဖြင့်ပြတိုက်မည်မျှတည်ထောင်နိုင်သနည်း။
94. Kanal Istanbul Project ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်ပြည်နယ်ပြဇာတ်ရုံမည်မျှတည်ထောင်နိုင်မည်နည်း။
95. Kanal Istanbul Project ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်အားမီးသတ်သမားဘယ်နှစ်ယောက်ခန့်အပ်နိုင်သနည်း။
96. Kanal Istanbul စီမံကိန်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုးနှင့်အမျိုးသမီးများအားအကြမ်းဖက်မှုမှကာကွယ်ခြင်း၊ ကလေးသတို့သမီးများ၏ပြsolvingနာကိုဖြေရှင်းခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးများ၏အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်မည်မျှစီမံကိန်းများကိုထောက်ပံ့နိုင်သနည်း။
97. Kanal Istanbul စီမံကိန်း၏ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်တစ်oneကကျယ်ဝန်းသည့်ဖန်လုံအိမ်တစ်ခုတွင် (မြေယာနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အခြေအနေ) ရှိသည့်စုံတွဲအတွဲမည်မျှရှိသနည်း။
98. Kanal Istanbul Project ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးနှုန်းဖြင့်သူငယ်တန်းမည်မျှဖွင့်နိုင်သနည်း။
99. Kanal Istanbul စီမံကိန်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်အညီပညာရေးကဏ္ investment မည်မျှမြှုပ်နှံနိုင်မည်နည်း။
100. Kanal Istanbul စီမံကိန်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူ R&D စင်တာမည်မျှတည်ထောင်နိုင်သနည်း။
၁၀၁။ Kanal Istanbul Project နှင့် R&D နှင့် Design Center Support တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးနှုန်းကိုမြှင့်တင်ခြင်းဖြင့်မည်မျှစီမံကိန်းများအကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည်နည်း။
၁၀၂။ Kanal Istanbul စီမံကိန်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်စက်ရုံမည်မျှတည်ဆောက်နိုင်သနည်း။
103. Kanal Istanbul စီမံကိန်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတန်ဖိုးနှင့်အိုင်တီကဏ္ on အပေါ် အခြေခံ၍ မက်လုံးများကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်မည်မျှစီမံကိန်းများကိုအကောင်အထည်ဖော်နိုင်မည်နည်း။
၁၀၄။ ကျောင်းသား ၂၀ ဦး စွမ်းရည်ရှိသောစာသင်ခန်းမည်မျှဖွင့်နိုင်မည်နည်း။ ထို့ကြောင့် Kanal Istanbul Project နှင့် coding များကိုမူလတန်းကျောင်းများ၌သင်ခန်းစာအဖြစ်သင်ကြားနိုင်ရန်အတွက်ဖွင့်နိုင်သည်။
105. ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို Kanal Istanbul စီမံကိန်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးနှုန်းဖြင့်ပံ့ပိုးရန်မည်မျှစီမံကိန်းများကိုထောက်ပံ့နိုင်သနည်း။
၁၀၆။ Kanal Istanbul စီမံကိန်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးနှုန်းဖြင့်အထည်အလိပ်ထုတ်ကုန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းမည်မျှကိုရန်ပုံငွေထောက်ပံ့နိုင်သနည်း။
၁၀၇။ Kanal Istanbul စီမံကိန်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်သတ္တုတွင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းမည်မျှကိုရန်ပုံငွေထောက်ပံ့နိုင်မည်နည်း။
ရေဒီယို၊ ရုပ်မြင်သံကြား၊ ဆက်သွယ်ရေးကိရိယာများနှင့်ကိရိယာများသည် Kanal Istanbul Project ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းတွင်မည်မျှရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သနည်း။
109. Kanal Istanbul Project ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးနှုန်းနှင့်လေနှင့်အာကာသယာဉ်ထုတ်လုပ်မှု၏အရင်းအမြစ်ကိုငွေကြေးထောက်ပံ့နိုင်ပါသလား။
၁၁၁။ Kanal Istanbul စီမံကိန်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူဖန်လုံအိမ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းမည်မျှကိုရန်ပုံငွေထောက်ပံ့နိုင်မည်နည်း။
112. Kanal Istanbul Project ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်စက္ကူထုတ်ကုန်များမည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစီမံကိန်းများကိုရန်ပုံငွေထောက်ပံ့နိုင်မည်နည်း။
113. Kanal Istanbul စီမံကိန်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုစျေးနှုန်းဖြင့်လေယာဉ်ပျံသန်းမှုစီမံကိန်းအတွက်အရင်းအမြစ်များကိုထောက်ပံ့နိုင်သလား။
Kanal Istanbul စီမံကိန်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်တစ်နှစ်အတွက်အနည်းဆုံးလုပ်အားခထောက်ပံ့မှုမည်မျှအလုပ်ရှင်မည်မျှရရှိနိုင်သည်။
115. အရှေ့တောင်အာရှအာနတိုလီစီမံကိန်းအောက်ရှိပြည်နယ်များရှိလူများစွာ၏တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုထောက်ပံ့ရန်ထောက်ပံ့ငွေကို Kanal Istanbul စီမံကိန်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူပေးအပ်ခြင်းခံရနိုင်သလား။
116. အရှေ့ပင်လယ်နက်စီမံကိန်းတွင်ပါဝင်သောပြည်နယ်များရှိလူ ဦး ရေသည် Canal Istanbul စီမံကိန်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူသူတို့၏မွေးမြူရေးဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုထောက်ပံ့ရန်ရန်ပုံငွေကိုမည်မျှပေးမည်နည်း။
117. Konya Plain စီမံကိန်းအောက်ရှိပြည်နယ်များရှိသူတို့၏မွေးမြူရေးဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုထောက်ပံ့ရန်ရန်ပုံငွေမည်မျှပေးအပ်နိုင်သနည်း။
118. အရှေ့ Anatolia စီမံကိန်းနှင့် Kanal Istanbul စီမံကိန်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်အတွင်းရှိပြည်နယ်များရှိသူတို့၏မွေးမြူရေးဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုထောက်ပံ့ရန်ထောက်ပံ့ငွေမည်မျှရှိသနည်း။
သူကအစ္စတန်ဘူလ်က Metro Tanrikulu ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုမေးမြန်း
CHP Tanrikulu, မီးရထားအတွက်ဆုံးရှုံးမှုယာဉ်ညီလာခံအစီအစဉ်
Tanrikulu မေးလျှင်, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး TCDD အတွေ့အကြုံနှုတ်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင့်ယှက်
ဒါကြောင့်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်နေ့ရက်မှ Tanrikulu,3။ ငါတံတားအသုံးချနှုန်းကိုမေးမြန်း
CHP Tanrikulu သူတောင်းဆိုချက်များသူဝန်ကြီးချုပ်ကိုမေးမြန်း
CHP Tanrikulu, ပါလီမန်သုတေသနဘေးအန္တရာယ်များအတွက် YHT များအတွက်တာဝန်ရှိတောင်းဆို
Metro Akkiray မေးခွန်းကနေ chpli
Izmir လမ်းရထားနူးညံ့သောအနေဖြင့်ဝေဖန်မှုများ MHP Tanrikulu
တင်ဒါကြေငြာချက် - Basmane - Afyon လိုင်းကီလိုမီတာ ၁၁၈ + ၆၀၀ မှ ၁၁၉ + ၁၂၀ အကြားရှိကွန်ကရစ်ရထားလမ်း။
Kanal Istanbul စီမံကိန်း
Kanal Istanbul စီမံကိန်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်
Konya ရိုးရိုး Project မှ